15 Febroary 2019, Varavarana misokatra ho an’ireo manam-pahefana miasa ho an’ny ankizy eto an-toerana, Grandir à Antsirabe | Grandir à Antsirabe
Nanokatra ny varavarany tamin’ireo manam-pahefana miasa ho an’ny fiarovana ny ankizy, réseaux sahaza ny Grandir à Antsirabe ny zoma 15 febroary lasa teo. Nanaraotana ihany koa nanasana ireo fikambanana naniry te ahafantatra bebe kokoa ny asan’ny fikambanana, Zanak’Bira. Nasana tamin’izany ihany koa ireo solon-tena avy amin’ny fokontany misy ny fikambanana sy hanaovan’i Grandir à Antsirabe ireo hetsika maro, fokontany Antsimotsena sy Ampatana.
Vao maraina dia efa serintseriny ny mpikarakara tamin’ny fanomanana ny fandraisana ireo vahiny. Somary nisy ihany aloha ny ahiahy teny ampiandohana hoe ho avy ve ireo nasaina ? Saingy tony avy hatrany izany rehafa nahita ireo olona nandrasana tonga tsikelikely nameno ny efitrano. Na nisy aza ny tsy afaka noho ny fandaharam-potoana dia nahafapo tokoa ny nandray ireo tonga namaly ny antso.
Tamin’ny 10 ora maraina no nanomboka ny fotoana nialohavan’ny kabary fiarabana sy fisaorana ireo vahiny. Vita ny lahateny fandraisana nataon’ny talen’ny fikambanana dia niroso avy hatrany tamin’ny votoatiny. Natao tamin’ny endrika kilalao no nisarihana ny sain’ny mpanatrika ahafantatra sy ahazo antsaina ny fiainana iainan’ny ankizy miaina eny an-dalambe. Nasana izy ireo haka ny toeran’ny ankizin’ny lalana iray ary hiaina sy hisaina toy ilay ankizy. Nandray anjara navitrika avokoa ny rehetra nandrindratry ny kilalao.
Fanehoan-kevitra nandraisan’ny vahiny anjara
Tompon’andraikitra ny tsirairay amin’ny fiarovana ireny ankizy tra-pahasahiranana ireny. Izany indrindra no nanentanana ny mpanatrika haneho hevitra momba ny fisorohana ny tsy ahatongavan’ny ankizy eny amin’ny lalana. Tsy izay ihany fa nasaina koa izy ireo hnaposaka ny heviny mahakasika ny fomba hiarovana ireo ankizy efa eny amin’ny lalana ary farany ny vahaolana arosiny amin’ny fandraisana an-tanana ireo ankizy miaina eny an-dalambe. Nozaraina tarika 5 ny vahiny dia samy nikaon-doha sy nizara izay hevitra voangona tamin’ny mpanatrika rehetra.
Ny masaka azo naroso !
Tamin’ny tapany farany tamin’ny varavarana misokatra no nandraisan’ireo tompon’andraikitra tsirairay ao amin’ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizin’ny Lalana, Grandir à Antsirabe anjara. Nanazava tsirairay ny fomba fiasa sy ny tanjona kendrena amin’ireo tetikasa ao amin’izany fandaharanasa izany. Nandray anjara tamin’izany ny tompon’andraikitra tao amin’ny Activités Jour, Equipe Mobile d’Aide, Centre d’Hébergement Temporaire ary ny Accompagnement Social.
Fiarahana niala hetaheta sy fizarana calendrier 2018 Grandir à Antsirabe no nanakatona ny varavarana misokatra.
Fisaorana sy fankasitrahana ho antsika tonga nanatrika!
Hisaorana sy hankasitrahana hatrany ny « Réseau SAHAZA », « Groupe Zanak’Bira », fokontany Atsimotsena sy Ampantana tonga namaly ny fanasana tonga namaly ny antso. Antenaina fa hitohy sy hihamafy hatrany ny fiaraha miasa.
Tsy adinoina ihany koa ny misaotra ireo ekipa Grandir à Antsirabe tamin’ny fiaraha-mientana nahafahana nanatontoso iny hetsika ho fampafantarana ny fikambanana iny.
Mbola hitohy ny varavarana misokatra hanasana ireo fikambanana mpiara-miasa mpikambana ao amin’ny tambazotra OSCAPE.
Lire aussi : Fandraisan’ny ekipa Grandir à Antsirabe anjara amin’ny hazakazaka arahin-tsakana Mandrevo